tamin'ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Nanambara ny Kardinaly Désiré Tsarahazana fa manameloka ny tetika sy fikasan-dratsy haka fahefana amin'ny alalan'ny herisetra sy fifofoana ain'olombelona ny fiaingonana Katolika. Nitondra ny teny fankaherezana ho an'ny filoha Andry Rajoelina avy amin'ny fanjakana Vatikana rahateo moa ireto solon-tenan'ny fiangonana Katolika ireto. Tsy manao politika ary tsy manana kandidà hatolotra ho Praiminisitra araka ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra sosialy ny Fiangonana Katolika, hoy hatrany ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Amin'ny maha raiamandreny am-panahy azy ireo dia miteny sy manoro kosa izay tomponandraikitra rehetra mila izany, mikasika izay mety sy tsy mety ny fiangonana. Nifampizara ireo vaovao sy hafatra mikasika ny fiainam-pirenena ihany koa ny filoham-pirenena sy ireto solontenan'ny fiangonana Katolika ireto. Niaraka tamin'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana tamin'ity dinidinika niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina omaly ity moa ny Evekan'i Morondava, Monseigneur Marie-Fabien Raharilamboniaina, sy ny Sekretera Jeneralin’ny « Conférence des Évêques », Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa. Izao no natao dia ho fifankaherezana sy fiaraha-mitady vahaolana hisian'ny fitoniana sy fahandriam-pahalemana eto amin'ny Firenena, hoy hatrany ny fampitam-baovao.